Muxuu ka yiri Pirlo kaddib kulankiisii ​​ugu horreeyay kooxda Juventus ee horyaalka Serie A?? – Gool FM
(Turin) 21 Sebt 2020. Kooxda Juventus ayaa guul ku biloowatay olalaheeda horyaalka Serie A ee xilli ciyaareedka cusub, kaddib markii ay kaga adkaatay naadiga Sampdoria 3-0, kulan xiiso badnaa ay ku wada ciyaareen garoonka Allianz.
Goolasha kooxda Juventus waxaa u kala dhaliyay, Dejan Kulusevski daqiiqadii 13-aad, Leonardo Bonucci daqiiqadii 78-aad, iyo Cristiano Ronaldo daqiiqadii 88-aad, taasoo Bianconeri ka caawisay inay gacanta ku dhigto inay hesho saddexdeedii dhibcood ugu horeysay horyaalka Talyaaniga ee xilli ciyaareedkan cusub.
Haddab shabakada “Italian football” ayaa shaacisay wareysi uu bixiyay tababare Andrea Pirlo, wuxuuna yiri:
“Waa muhiim in ciyaartoyda ay wada hadlaan, maadaama aan ciyaartoy ahaa dhowr sano, mar walba waxaan jeclaa inaan iyaga la hadlo”.
“Qeybtii hore way fiicneyd, waana nasiib daro inaannaan dhalin wax ka badan hal gool”.
“Heerkeena jir ahaaneed wuu daciifay dhamaadka, laakiin waxaan ku sii nagaanay isku xirnaan iyo xakameyn dhamaan boosaska ciyaarta, oo ay ku jiraan weeraradii rogaal celiska ahaa ee kooxda Sampdoria”.
“Ma doonayo inaan koobiyeeyo fikradaha qof walba, waxaan hayaa fikrado aniga ii gaar ah”.
“Ma aanan helin waqti badan, maadaama diyaargarowga xilli ciyaareedka uu daahay, intaas kaddib waxaa jiray ciyaaro caalami ah oo ay ciyaartoydu ka qaybgaleen, maan heysan wax ka badan hal kulan oo saaxiibtinimo ah”.
“Laakiin ciyaartii maanta waxay ahayd bilow wanaagsan, waana sii wadi doonaa inaan ka shaqeyno wixii inoo qabsoomay”.